अर्थ-Nepali online news portal
सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुनै समय नाफामा थियो । तर, तथ्याङ्क हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, आजभन्दा करिब ४५ वर्षअघि नेपालले आयातभन्दा दोब्बर निर्यात गर्थ्यो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक...
नेपाल हाल ६ खर्ब ९८ अर्ब ऋणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८४ अर्ब र बाह्य ऋण ४ खर्ब १४ अर्ब रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका...
ऋणले एउटा गरिब किसानको घरखेतसम्म डुबाउन सक्छ। तर एउटा व्यापारी वा उद्योगपतिका लागि ऋण भविष्यमा धन बढाउने माध्यम हुँदोरहेछ। व्यक्तिगत जीवनमा धन र ऋणको परिभाषा जति सरल बुझिने देखिन्छ, व्यापार र उद्योगका लागि ऋण र...
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा १४.८ प्रतिशतले बढेर रु ४ खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सोही अवधिमा व्यापार घाटा रु ४ खर्ब २९ अर्ब ८७ करोड...
संसारकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिङ कम्पनी अमेजनका सीइओ जेफ बेजोस विश्‍वकै धनी व्‍यक्ति बनेका छन्।अमेरिकी आइटी अनलाइन ब्लुमबर्गले गरेको सर्वेक्षणमा सिइओ बेजोसको कम्पनी अमेजनले शुक्रबार मात्रै १३ प्रतिशत कमाएपछि उनी विश्‍वकै धनी व्‍यक्तिमा सूचीकृत भएका...
उत्पादनमूलक वस्तु प्रवद्र्धन गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अललम्बन गर्न नसक्दा नेपालले बर्सेनि अर्बौंको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार गत आवमा नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक रु नौ खर्ब नौ अर्ब २६ करोड छ...
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा व्यापार घाटा ६६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विभिन्न मुलुकबाट हुने आयात ६० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेका कारण व्यापार घाटा आकासिएर ५...
श्रम तथा रोजगार मन्त्री सुर्यमान गुरुङले बिप्रेषणले देश बन्छ भन्ने पक्षमा आफु नरहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आयोजना गरेको २४ औं साधारण सभामा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । ‘बिप्रेणले देश अब...
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको वृद्धि भए पनि मलेसियामा सो अनुपातमा नेपालीको व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकको तुलनामा मलेसिया लगानीयोग्य बन्न नसकेकोमा त्यहाँ रहेका नेपाली चिन्तित बनेका छन् । मलेसियामा...
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? अहिले भूकम्पको र त्यसपछिको नाकाबन्दीको प्रभाव बिस्तारै घट्दै गएको छ । यसपटक नयाँ बजेट समयमै आएको कारणले धेरै समयसम्ममाथि उठ्न नसकेको सेक्टरहरू पनि बिस्तारै पुनर्जागरण भएर आएका छन्...